अमेरिकी खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर, सरकारी कामकाज पुनः सुचारु | Jukson
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खर्चसम्बन्धी नयाँ पारित विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कानुनी रुप दिएका छन् । विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेसँगै छोटो समयका लागि बन्द भएको अमेरिकी सरकारी कामकाज पुनः सञ्चालनमा आएको छ । सिनेटले खर्च विधेयक पारित गर्नुपर्ने समयसीमा नाघेपछि अमेरिकामा यस वर्ष दोस्रो पटक सरकारी कामकाज ठप्प भएको थियो । तर पछि सो विधेयक पारित भएको थियो ।
वैधानिक खर्च व्यवस्थाको अभावमा मध्यरातपछि केहि समयका लागि बन्द हुन पुगेको सरकारी कामकाज संचालन हुन सक्ने गरी राष्ट्रपति ट्रम्पले कंग्रेसबाट अनुमोदित विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ६५० पृष्ठ लामो खर्च योजनामा प्रतिरक्षा र आन्तरिक सेवाहरुमा गरिने खर्चको सीमा बढाइएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आगामी दुई वर्षसम्म खर्चको व्यवस्था गर्ने उक्त विधेयक मध्य रातको समयसीमा अगाडी नै पारित हुनु अघि सिनेटरहरुले अन्तिम समयमा केही असहमतिहरुको सामना गर्नु परेको थियो । पारित विधेयकमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अब अमेरिकी सेना पहिले भन्दा बलियो हुने बताएका छन् । (एजेन्सी)
इन्स्टाग्राममा कसले चियो गर्दैछ ? अब थाहा पाउनुहुनेछ
फेसबुकले ल्याउँदैछ डाउनभोट फिचर
फेसबुकबाटै यौन धन्दा सञ्चालन !
नेपाली समाज र बलत्कार
विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा रेवान पोखराले मिनि सडक महोत्सव गर्दै
अन्डरवर्ल्ड डन दाउदलाई भेट्न अचानक पाकिस्तान गएका रहेछन् नरेन्द्र मोदी